Mucjiso qaliin oo cusub,Dhererkaaga ayaa la kordhinayaa,
Sam markii hore wuxuu ahaa 162cm, qalliinka kadib waa 170cm
Sanad kasta boqolaal qof oo adduunka daafihiisa ayaa gala qalliin culus oo looga sameeyo xagga lugaha, si ay u helaan dherer ama itaal ka saaid ah inta ay la egyihiin. Balse hawsha ma ahan mid sahlan, waxayna wadataa dhibaatooyin caafimaad o oculus.
Sam Becker wuxuu ahaa ilmo aanan itaal xumeyn markii uu dhiganayay dugsiga dhexe, balse markii tacliinta sare uu u gudbay ayuu arkay in gadaal looga tagay, saaxiibadiisna ay noqdeen kuwa isaga ka dheer.
“Caadi ahaan dumarka haasaawe iyo sheeko lama wadaagaan ragga iyaga ka gaaban, markaas tan iigu daran waa dareenka ah in aanba waafo qof xaas ii noqota” ayuu yiri Becker.
Sam oo ku nool magaalada New York, Maraykanka ayaa rajaynaya in uu dheeraado inkasta oo uu gaaray halkii ugu dambeysay ee itaal ahaan uu gaari lahaa.
La tashi badan kadib , sanadkii 2015-kii ayuu galay qalliin xagga lugaha ah, kaas oo lagu daray 7 inc oo dherer ah, haddana dhererkiisa wuxuu gaaray 170cm.
“Waa arrin culus in labadaada lugoodba lagaa jabiyo, haddane inta la kabo aad baratid socodka” ayuu yiri Sam oo muddo 6 bilood ah samaynayay jimicsi iyo socod-barasho hor leh.
Xarumaha caafimaad ee addeegan bixiya ayaa sheegaya in ay soo kordhayaan dadka dalbanaya qalliinkan, iyada oo dadka lagu dheereeyo biyo lagu rakibayo lugaha.
Dalalka adeeggan laga helo waxaa ka mid ah Maraykanka, Jarmalka, Kuuriyada Koonfureed, Spain, Hindiya, Turkiga iyo Talyaaniga, waxaana la sheegay in sanad kasta 20 ilaa 40 jeer la sameeyo qalliinkan dal kasta.
Raajo muujinaysa isbadalka ku dhacaya lugaha qalliinka kadib
Qiimaha qalliinkan waxa uu u dhaxeeyaa $75 kun oo doolar illaa $280 kun oo doolar qofkiiba.
Waxaa qalliinkan markii ugu horeysay bilaabay nin magaciisu yahay Gavril Ilizarov, oo ah dhaqtar u dhashay Ruushka, kaas oo daweynayay askartii kusoo dhaawacantay askartii dagaalkii labaad ee adduunka.
Lafta lugta ayaa god laga duleelinayaa, kadibna labo ayaa loo kala jabinayaa, iyada oo lagu xirayo bir isku haysa oo leh boolal.
Barny ayaa dhibaatooyin kala kulmay qalliinka
Dadka dhibaatooyinka kala kulmay qalliinkan waxaa ka mid ah nin magaciisu yahay Barny, oo sheegay in uu 2015-kii dalka Talyaanida qalliinka ku galay, wuxuuna sheegay in maadaamaa isaga oo 46 jir uu hawshan galay, uu kala kulmay dhibaatooyin bogsiimo la’aan ah.
Dr David Goodier, oo ah dhaqtar ku sugan UK ayaa sheegay in ay la tahay in dad badan aanan si wanaagsan tallooyin looga siinin dhibaatoyinka caafimaad ee ka dhalan kara qalliinka caynkan ah.
Waxaa beenoowday mah maahdii reer xamarka ee Gaabow waa jiraa laakiin dhuubow ma jiro